शायद हरेक मालिक घरेलू र आयात, एसयूवी कहिल्यै आफ्नो एकाइ को permeability सुधार गर्न चाहन्थे। र मोटर चालकहरुलाई को बहुमत पनि गहिरो ruts, bogs हटाउन आवश्यक छैन, ठाडो पहाड चढ्नु। Permeability कम्तिमा सिर्फ एक स्तर स्थानमा अड्केको प्राप्त गर्न छैन वृद्धि। "क्षेत्र" मा लक स्थापित बन्द-सडक प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। हामीलाई के सिद्धान्त, फाइदा र बेफाइदा काम, तिनीहरू हेरौं।
मोटर वाहन डिजाइनर र ईन्जिनियरहरु को प्रारम्भिक दिनमा फिर्ता empirically दुई पाङ्ग्रा लागि भनेर ठोस एक्सल फेला - यो उपयोगी छैन। एक सीधा लाइन trajectory मा मिसिन लगभग कहिल्यै प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक टायर आफ्नो बाटो पार हुनेछ। टायर थप वस्त्र, र कार खोल्न चाहनुहुन्छ छैन। यो इष्टतम समाधान खोज्न ईन्जिनियरहरु उक्सायो। तिनीहरूले सोचे - र अझै पनि आए।
तसर्थ, अक्ष दुई आधा-लाइन विभाजित र बीच स्थापित गरिएको छ अंतर। यो फरक साथ - पाङ्ग्रा नै गति मा र कुनामा मा लाइन मा घुमाउन दिनुभयो। तथापि, कवरेज सधैं पूर्ण समान छ। बालुवा - उदाहरणका लागि, पाङ्ग्रा एक अन्तर्गत पत्थर, विभिन्न राम्रो छ। त्यसैले, एक पाङ्ग्रा सजिलो घुम्नेछन्। यो उद्देश्य र लागि अंतर आवश्यक छ। त्यो पाङ्ग्रा गाह्रो घुमाइन्छ, यो मोड छैन। त्यसैले ईन्जिनियरहरु slippage को प्रभाव बारे सिकेका छन्। पनि चार-पाङ्ग्रा ड्राइव यो समस्या समाधान गर्न सक्षम थियो। , लक पूर्ण slippage हटाउन सिर्जना गरिएको थियो। को "फिल्ड" मा दुर्भाग्य खडा गर्दैन। तर यो कार मालिक खरिद छुट्टाछुट्टै यी तंत्र स्थापना गर्न त धेरै आवश्यक छ।
ताले को प्रकार
यसलाई बाध्य वा स्वचालित या त हुन सक्छ। बाध्य को मामला मा ड्राइभर आफूलाई समावेश छ। विशेष आत्म-ताला तंत्र प्रयोग काम गर्न सेट "फिल्ड" स्वचालित लक।
प्रवर्तन सिस्टम को प्रकार
अक्सर यस मामला मा, क्याम क्लच प्रयोग। तिनीहरूले अधिकतम कठोरता र यौगिकों आवास अक्ष प्रदान गर्न मद्दत। खोल्न र यात्री कक्ष मा लीवर सार्दा द्वारा क्याम स्लिभ बन्द गर्नुहोस्। यांत्रिक ड्राइव संयुक्त केबल र लीवर, वा levers को प्रणाली। "क्षेत्र" स्थापित, मा सकारात्मक ताला लीवर सारेर ड्राइभर द्वारा actuated छ। मेशिन खडा गर्नुपर्छ।
एक actuator तत्व रूपमा प्रयोगमा वायवीय सिलेंडर। अर्को मामला मा, युग्मन सर्किट बिजुली ड्राइव को माध्यम द्वारा हुन्छ। "क्षेत्र" सेट मा सकारात्मक ताला यस मामला मा, एउटा बटन थिचेर समावेश गरिएको छ। कठोर fixation विशेष गाह्रो भागहरु हटाउन प्रयोग गरिएको छ। तिनीहरूले आवश्यक बन्द यसलाई पार गरेपछि।
सीमित पर्ची भिन्नता
यी प्रक्रियाको कठोर ब्लक र freewheeling को अंतर सञ्चालन बीच एक समझौता छन्। त्यसैले, यस्तो प्रणाली को आधारमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, र त्यसपछि, र थप। पहिलो मामला मा viscous युग्मन लागू गर्न वा अंतर डिस्क, र दोस्रो कृमि गियर संयन्त्र प्रयोग गरिन्छ।
को "फिल्ड" यो लक Perforated डिस्क को एक सेट छ। यी तत्व को एक अंतर आवास र अन्य जोडिएको छ - ड्राइव शाफ्ट संग। डिस्क विशेष उच्च चिपचिपाहट तरल भरिएको छ आवास छाप छन्।
को परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती अंतर र ड्राइव बेल्ट नै हुँदा, एकाइ एक एकाइ रूपमा संचालित। ड्राइव शाफ्ट वृद्धिको गति, जोडिएको डिस्क पनि तिनीहरूलाई साथ छिटो र तरल पदार्थ चाल घुमाउन अतिरिक्त भने। यो कठिन र अन्ततः अंतर ताले बन्नेछ।
क्लच आकार पर्याप्त ठूलो भएकोले यसलाई प्राय प्रयोग गरिन्छ केन्द्र अंतर। यो गरम गर्न सकिन्छ कारण यसको डिजाइन गर्न। ड्राइभर को ब्रेक सिस्टम क्रियाशीलता गर्दा युग्मन ABS सँग जुध्न सक्छ, त्यसैले यो लगभग कुनै एक यो प्रयोग अहिले छ।
कृमि सीमित पर्ची भिन्नता
यो प्रणाली स्वचालित ताला प्रदान गर्दछ। काम शरीर मा torques र ड्राइव शाफ्ट भिन्नता मा निर्भर गर्दछ। व्हील पर्ची र टोक घटेको भने, कृमि अंतर अवरुद्ध र टोक कुनै पनि निःशुल्क पाङ्ग्रा निर्देशित गरिने छ। यी डिजाइन थप लोकप्रिय छन्। Torsen र Quaife - सबै भन्दा प्रसिद्ध केही।
यी constructs ग्रह गियर एकाइहरु, जो ड्राइभिङ र संचालित कृमि गियर समावेश प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्तो संयन्त्र interwheel र interaxle छन्।
मोटरहाक्ने व्यक्ति लक-मुक्त "क्षेत्र" हुन्छ, र यो छ - एक गम्भीर बेफाइदा। मेशिन मात्र क्रस-एक्सल भिन्नता अवरुद्ध छ। तर यो माटोको र marshes वास्तविक प्रेमीहरूको लागि पर्याप्त छ। उपलब्ध बन्द-सडक प्रेमीहरूको के हो?
कम्पनी 2005 देखि उत्पादन विनिर्माण। ब्रान्ड को अनिवार्य क्रस-एक्सल लक ज्ञात र धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो छ। को "Niva" निर्माता लागि अगाडि एक्सल मा पूर्ण लक प्रदान गर्दछ। यो एक बिजुली ड्राइव संग सुसज्जित छ। पनि प्रदान आत्म-ताला स्क्रू लक ( "Niwa") छन्। तिनीहरूलाई समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक। उपकरण संचालित, र यसको विश्वसनीयता पर्याप्त उच्च छ। यी ताले प्रयोग भू-भाग कुनै पनि प्रकारको लागि हुन सक्छ - यो swamps, वन र यति मा हुन सक्छ। यी व्यवस्था बन्द-सडक लागि पूर्ण हो, र दैनिक लागि भारी खण्डहरू ड्राइभिङ।
अन्तर स्वचालित Krasikov (DAK)
पहिलो पटक वी एन Krasikov 2002 मा पहिलो सिस्टम गरे। 2004th यो पेटेंट लक। यो अद्वितीय विकास - सीमित पर्ची अंतर भविष्य। यसलाई स्वचालित ताला संग एक यांत्रिक सिस्टम छ।
प्रक्रिया ड्राइभिङ्ग पाङ्ग्रा परिवर्तन गरेर बाहिर छ। यो यो संयन्त्र धेरै नरम र सबैभन्दा सबै गति दायराहरूमा स्थिर छ संचालित गर्न सम्भव बनाउँछ। डिजाइन अंतर को प्रयोग बन्द-सडक "Niva", तर पनि अन्य सबै मोडेल मात्र छैन अनुमति दिन्छ। यो उपकरण गुणस्तर र सामान्य अंतर समारोह जोडती। साथै, त्यहाँ छ कार पाङ्ग्रा एक स्थापित गर्दा एक महत्वपूर्ण बेफाइदा हटाइयो। यो संयन्त्र को आयाम क्लासिकल प्रणाली बाट व्यावहारिक कुनै फरक छ। तिनीहरूले मनपरी प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। मोटर चालकहरुलाई कुनै थप कुशल डिजाइन छ कि तर्क। यो "Niva" को सम्पूर्ण सम्भावनाहरू प्रकट गर्न सक्षम हुने एक सभ्य विकल्प छ।
को "Cornfield" (DAK) मा लक कसरी
यो स्वचालित अंतर कुनै पनि सडक र बन्द-सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ। सम्भव गति र भार धेरै व्यापक दायरा। वाहन चाल र इन्जिन को thrust कमजोर पकड पाङ्ग्रा भन्दा उच्च छ जब अंतर बन्द छ। यदि thrust को घर्षण विशेषताहरु नाघ्यो, स्वचालित लक हुनेछ। को "कमजोर" पाङ्ग्रा घुम्छन् छैन।
AIBN मात्र बन्द-सडक अवस्था प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ। DAK7एक खेलाडी ड्राइभिङ लागि डिजाइन गरिएको छ। तर डैक-5 एक बहुमुखी उपकरण भनेर पनि सबैभन्दा टाढाको ठाउँमा मा कार पकड अनुमति दिन्छ। अगाडि एक्सल मा "क्षेत्र" मा लक स्थापना गरिन्छ। यो संयन्त्र हदसम्म कति अवस्था को maneuverability र स्थिरता वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ।
DAK7- एक औसत कठोरता संग लक। जडान जो पुल, वा चिप्लो अवस्थामा वा बाटोमा प्रणाली स्थापना गर्नुहोस्। AKD-5 नरम छ, र स्थायी रूपमा शामिल जो आफ्नो पुल लागि चयन गरिएको छ।
यो प्रणाली कठिन सतह मा मुख्य रूप प्रयोग गरिन्छ जो ती वाहन लागि आदर्श छ। DAK-5 शक्तिहरू एक व्यापक दायरा, यसलाई जारी छ जो को प्रभाव अन्तर्गत छ। उपकरणको स्रोत अन्य मोडेल तुलनामा उच्च छ।
लक "फिल्ड" गर्न "आईएल-टेक्नो" एक एकदम सरल र थप विश्वसनीय डिजाइन छ। संयन्त्र दुई आधा-axial र spacer आस्तीन हुन्छन्। पनि पानीका मुहानहरू र पिन समावेश छन्।
अक्सर, प्रणाली निरन्तर बन्द छ, र अंतर रूपमा कम्तीमा एक पाङ्ग्रा ड्राइभिङ भन्दा छिटो कताई गर्दा मात्र संचालित। ताला रोलिंग प्रतिरोध को इन्जिन टोक र शक्ति को कार्य द्वारा ठाउँ लिन्छ। यस्तो यन्त्र पाङ्ग्रा बाह्य शक्तिहरू द्वारा प्रभावित हुने बेलामा मात्र एक अंतर रूपमा सञ्चालन हुनेछ। चिप्लो अवस्थामा, यो लक निश्चित र एक्सल सबै पाङ्ग्रा गर्न टोक हस्तान्तरण हुनेछ।
अवरुद्ध "फिल्ड" मा दिइएको छ
दान - एक स्वचालित अंतर Nesterov छ। तपाईं एक को वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट को "Niva", र "शेवरलेट Niva" रूपमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यो लक खराब सडक को अवस्थामा ह्यान्डल गर्ने सुधार र cornering गर्दा चपलता सुधार हुनेछ। प्रणाली पनि धेरै हदसम्म यो overtaking गर्दा स्थिरता ड्राइभिङ योगदान पुग्छ। अन्तर Nesterov पनि हिउँदमा, ड्राइभिङ गतिशीलता वृद्धि गर्न सक्षम। यो उपकरण कुनै पनि बालुवा वा हिउँ मा माटोको र swamps वा फँस गरिनेछ। यसलाई लागू गर्न र पूरै शहर र राजमार्ग मा सजिलो हुन सक्छ, र रबर खराब छैन।
यो स्वचालित अंतर साईट चालकहरुको लागि सिफारिस गरिएको। डिजाइन कठिन अवस्थामा विश्वस्त मानिस थप्छ। यसलाई जहाँ सम्भव slippage सार्न धेरै सजिलो हुन सक्छ। cornering वा ब्रेक लगान कार्य गर्दा पनि दान गर्ने drifts obviate छ।
यो पनि एउटा सक्रिय जीवन शैली रुचि गर्नेहरूका लागि अपरिहार्य छ। उपकरण anglers, शिकारी, कार यात्री लागि महत्त्वपूर्ण छ। को पदक-raids को सहभागीहरू लागि, यो पुरस्कार प्राप्त गर्न एक उत्कृष्ट मौका छ।
लाभ लक सुरक्षा पहिचान गर्न सकिन्छ बीचमा निकै पनि toughest अवस्थामा ह्यान्डल गर्ने सुधार गर्छ। आधुनिक सामाग्री मात्र उत्पादन प्रयोग गरिन्छ - दीर्घायु पनि बताए। प्रणाली को निर्माण को लागि सबै भन्दा आधुनिक उच्च प्रविधी उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। यो कि दान आर्थिक टिप्पण लायक छ।
आफ्नै हात संग "फिल्ड" लक अक्सर पर्याप्त गरिन्छ। र आज यो असामान्य छ। कारीगरों विकास र एक अद्वितीय धातु संरचना लागू। साथै, धेरै गैरेज "Lokrayt" प्रतिलिपि गर्छन् र आत्म-ताला प्रणाली। अक्सर बस पीसा अंतर।
सबैभन्दा निर्णय पानीका मुहानहरू संग विशेष bushings र पूर्व-लोड सदृश डिजाइन छन्। काममा तिनीहरूले व्यावसायिक उत्पादन भन्दा कुनै खराब छन्। तिनीहरूलाई अझै पनि छैन यो लायक छ तर गम्भीर बन्द-सडक मा कल गर्न।
कसरी म आफ्नै हात संग "फिल्ड" मा लक गर्न? म यसलाई तपाईं कसरी धेरै उत्पादन लोकप्रिय ब्रान्ड थाहा विशेष गरी भने, एकदम सम्भव छ भन्ने महसुस। तपाईं एक चक्र पहुँच छ भने, त्यसपछि त्यहाँ एक समान संयन्त्र बनाउन कुनै कठिनाई छ।
साईट चालक समस्या प्रणाली प्रयोग सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ "Cornfield" मा लक सक्षम गर्ने बारे धेरै प्रश्न छन्। कहिलेकाहीं संयन्त्र बस पहिलो पटक मा उत्तेजित गर्दछ। यो पाप पनि पूर्ण serviceable प्रणाली। यो किन भइरहेको छ? यो कुरा यस संयन्त्र को काम चालक विशिष्ट ज्ञान र सीप आवश्यक छ। सामान्य मा, स्थानान्तरण र स्विच-लक - एक प्रक्रिया हो। तंत्र पनि कडा फरक।
वाहन स्थिर छ र चालक को अंतर ताला गर्न खोज्छ भने, यो केही गर्न सक्छ। Grooves र दाँत पार्किंग को समयमा नै हवालात क्लच छैनन्। यस मामला मा युग्मन दाँत को घन्टी तत्व विपरीत disposed हुन सक्छ। को क्लच बस छैन provernetsya छ। तपाईं खडा कार मा लक चलाउन असमर्थ हुनुहुन्छ भने, यो सरासर भाग्य द्वारा मात्र हुन सक्छ।
पासथ्रोका सक्षम गर्न, तपाईं क्लच प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो चरण बिना, प्रणाली काम गर्ने छैन। को क्लच मा पनि थोरै दबाव सापट दाँत आफ्नो नाली मा प्रवेश भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ। लक फरक संयन्त्र छ। यहाँ क्लच र उत्पादन सापट छ। पछिल्लो एक विशेष घन्टी गियर छ। दुवै तत्व राम्ररी उपग्रहहरु को माध्यम द्वारा परस्पर छन्।
बाहिर, यस "Cornfield" मा लक को समावेश पूरा गर्न पहिलो इन्जिन न्यानो अप, एक पहिलो गियर समावेश र सार्दा सुरु गर्नुहोस्। एक सीधा लाइन र सडक को एक कठिन सतह मा चढेर लक समावेश गर्न अनुमति छैन। किन यति? यो पछिल्लो र अगाडि पाङ्ग्रा दुवै नै दूरी हटाउन भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
व्हील लक सिस्टम सक्रिय कम गति ड्राइव र सही गर्न वा बायाँ चाहेअनुसार मोड्न गर्न आवश्यक छ। तपाईं पनि "Cornfield" मा लक खोल्दै लागि जिम्मेवार छ जो लीवर, प्रेस गर्नुपर्छ। अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रा फरक बाटो के हुनेछ, र दाँत आफ्नो नाली मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रणाली सक्रिय गर्न मात्र तरिका हो। यो प्रक्रिया सिद्धान्त प्रयोगमा स्थापित छ "Cornfield" मा लक कस्तो बिना र वर्तमान नै छ।
"शेवरलेट-Niva" - फरक छ?
यो पनि एउटा एसयूवी छ, र यहाँ पनि, लक लागू गरियो। एक पुरा को रूप सञ्चालनको सिद्धान्त, त्यो वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट को "Niva" गर्न तंत्र को सञ्चालन कुनै फरक छ। निर्माता लागि जाँदा, "Niva" गर्न लक गरे गर्नेहरूलाई धेरै, यो कार को लागि एक मोडेल प्रस्ताव।
जब तपाईं सिस्टम प्रयोग गर्न आवश्यक
"शेवरलेट-Niva" - एक अद्वितीय कार, यो प्रणाली संग सुसज्जित छ जो। यो दुर्गम भूमि हटाउन आवश्यक छ जब यो प्रयोग गरिन्छ। "शेवरलेट Niva" मा नै लक मा अग्रिम समावेश गर्नुपर्छ। साथै, यो विकल्प हिमाल मा उपयोगी छ। यो बलौटे सडक, हिउँ वा चिप्लो सतहहरु मा स्लिप को मामला मा अपरिहार्य छ।
हार्ड सतहहरु मा गायब लक गर्न आवश्यक छ। को पाङ्ग्रा अक्सर राम्रो आसंजन र वर्दी टोक छ।
को वाहन पूर्ण रोकिएको छ आवश्यक मात्र एक कम नम्बरमा मामला स्विच स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। सवारी चलाउँदा लक ( "शेवरलेट Niva" समावेश मा) सक्षम गर्नुहोस्। जाने तल्लो गियर मिसिन रोक बिना सम्भव छ। समय समयमा गर्न अंतर मा स्विच गर्न पर्छ लक संयन्त्र को सामान्य संचालन सुनिश्चित गर्न स्थानान्तरण मामला। यो विशेष गरी हिउँदमा साँचो हो।
"शेवरलेट Niva" मा लक कसरी सक्षम
यसलाई स्थानान्तरण बक्स लीवर मा समावेश गरिएको छ। तपाईं फिर्ता र निस्कने लीवर सार्नुभयो भने, तरिका स्थानान्तरण संख्या कम समावेश। दायाँ र बायाँ गर्न लीवर को आन्दोलन र लक बन्द। लीवर छोटो ह्यान्डल। बायाँ स्थिति - को अंतर सही, लक गरिएको छ - अनलक।
त्यसैले, हामी सकारात्मक ताला छ र कसरी घरेलू कार "VAZ Niva" र "शेवरलेट Niva" मा सेट अप कि फेला परेन। एक सानो धैर्य - र सफल!
रम कसरी पिउन सिक्न
हार्मोनल गर्भनिरोधक - लाभ वा हानि?
Manor Zakharov। संग्रहालय को इतिहास। फोटो र समीक्षा
तपाईं कसरी लागि संगठन INN उद्यम को थाह
"Berlamin मड्यूलर": निर्देशन र प्रतिक्रिया